HOME GYM (ဝိတ်မစက်များ) - BaganMart
ကွညျ့ရှု့သူ အရအေတှကျ : 1068 view counts
Brand : Winner Sport
Model :6in 1 Home Gym ၆ မျိုးသုံးဝိတ်မစက်၊6in 1 Home Gym ၆မျိုးသုံးဝိတ်မစက်၊4peoples use Home Gym ၄ယောက်သုံးဝိတ်မစက်၊ ခြောက်ယောက်သုံး ဝိတ်မစက်၊ ဝိတ်မစက်
လုပျငနျးအမညျ : Winner Sport Co.,Ltd Unverified Member
ဖုနျးနံပါတျ : Tel : 377215,399076
(1).6 in 1 Home Gym - ၆မျိုးသုံးဝိတ်မစက် : 3001D
(2).6in 1 Home Gym - ၆မျိုးသုံးဝိတ်မစက် : 3001F
(3).4peoples use Home Gym - ၄ ယောက်သုံး ၀ိတ်မစက် : 960H
(4). ခြောက်ယောက်သုံး ၀ိတ်မစက် : 9920A
(5). ၀ိတ်မစက် : 3001D
အားကစားခန်းမ ဖွင့်ထားသော လုပ်ငန်းရှင်များ နေဖြင့် အခန်းထည်းတွင် နေရာမယူသည့် ခြောက်ယောက်သုံး ဝိတ်မစက်များဖြင့် မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါသည်။
6 in 1 Home Gym ၆ မျိုးသုံးဝိတ်မစက်၊6in 1 Home Gym ၆မျိုးသုံးဝိတ်မစက်၊4peoples use Home Gym ၄ယောက်သုံးဝိတ်မစက်၊ ခြောက်ယောက်သုံး ဝိတ်မစက်၊ ဝိတ်မစက် များကို Winner Sport Show Room တွင်ရရှိနိုင်ပါသည်။
Winner အားကစား ပဒေသာဆိုင်ကို ၁၉၇၂ ခုနှစ်တွင် မဟာဗန္ဖုလ ပန်းခြံလမ်း (ဘားလမ်း) ကျောက်တံတားမြို့နယ်တွင် စတင် တည်ထောင်ခဲ့သည်။ အားကစား ပစ္စည်း၊ဝတ်စုံ၊ စက်ပစ္စည်း၊ လေ့ကျင့်ခန်းသုံး ပစ္စည်းများကို ယိုးဒယားနှင့် တရုတ်မှ တိုက်ရိုက်မှာယူတင်သွင်း ရောင်းချပေး နေပါသည်။ အရောင်းဆိုင်ကြီးကို ၂ဝဝ၄ ဇန်နဝါရီတွင် မဟာဗန္ဓုလပန်းခြံလမ်း (ဘားလမ်း) ကျောက်တံတားမြို့နယ် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ အားကစား စက်ပစ္စည်း၊ လေ့ကျင့်ခန်းသုံး ပစ္စည်း အရောင်းခန်းမ New Showroomကို မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ် ၊ဗိုလ်မင်းရောင်လမ်းတွင် ၂ဝ၁၂ နိုင်ဝင်ဘာ၇ရက်တွင်စတင် ဖွင့်လှစ်ထားပြီး အားကစားဝတ်စုံ၊ပစ္စည်းမျိူးစုံနှင့် အားကစားစက်၁စ္စည်း လေ့ကျင့်ခန်းသုံးပစ္စည်းစတင်ရောင်းချသည်။
ှTHE SERIES OF WEIGHT BENCH (ဝိတ်မစက်များ)
THE SERIES OF TRAINER BIKE (လေ့ကျင့်ခန်းသုံးစက်ဘီး)
THE SERIES OF TREADMILL (မော်တာလမ်းလျှောက်စက်များ)
For HOME GYM (ဝိတ်မစက်များ)
May I get the quotation for "HOME GYM (ဝိတ်မစက်များ)" ?